सेती अस्पताल भगवान भरोसामा, प्रदेश सरकार विकल्पविहीन – Health Post Nepal
२०७८ असार ५ गते | Saturday, 19 Jun, 2021
सेती अस्पताल भगवान भरोसामा, प्रदेश सरकार विकल्पविहीन
२०७७ वैशाख ५ गते ११:४५
चीनमा शून्य संक्रमित, चीनभन्दा इटालीमा धेरैको मृत्यु
सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण १४ जनाको मृत्यु
खरीपाटी क्वारेन्टाइन : शनिबार फेरि स्वास्थ्य परीक्षण, अझै केही दिन बस्नुपर्ने
नेपालगन्ज क्यान्सर अस्पताललाई आइसोलेसन कक्षका रूपमा प्रयोग गरिने
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि तोक्यो। अहिले २४ बेडको कोरोना उपचार कक्ष निर्माण भएको छ। पाँचजना कोरोना संक्रमितको अस्पतालमा उपचार पनि भइरहेको छ।
तर, प्रदेश सरकारले कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि तोकेसँगै प्रादेशिक अस्पतालमा अन्य बिरामीको संख्या भने ह्वात्तै घटेको छ। २ सय ४० बेड चलाइरहेको अस्पतालमा अन्य समयमा बिरामीको चाप निकै हुन्थ्यो।
कतिपय अवस्थामा त बेड पाउनका लागि समय नै कुर्न पर्थ्यो। तर, अहिले दिनमा जम्मा १०/१५ जना बिरामी मात्रै आउने गरेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. जगदीश जोशीले बताए।
प्रदेश सरकारले बलियो तयारी नगर्दा यहाँ कोरोनका बिरामीले राम्रो उपचार पाउने अवस्था छ, न अन्यले। कोरोनाका बिरामीका लागि अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर छैन। अन्य बिरामी कारोना संक्रमितको उपचार हुन्छ भन्दै डरले अस्पताल नै आउँदैनन्। अस्पतालको प्रसूति सेवासमेत प्रभावित भएको प्रवक्ता जोशीले बताए।
बन्द छ प्रसुती सेवा
अस्पतालमा दैनिक २०/२२ जना प्रसूति सेवाका लागि आउँथे। उनीहरूमध्ये चार/पाँच जनाको त अप्रेसन नै गर्नुपर्थ्यो। तर, अहिले अस्पतालमा प्रसूति सेवा बन्द गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वैशाख १ गतेदेखि प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसूति सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सरकारले प्रसूति सेवाका लागि नवजीवन अस्पताललाई तोको छ। सेती अस्पतालमा ३० जना भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी प्रसूति सेवामा खटिन्थे। त्यहाँ सुविधा सम्पन्न अप्रेसन थिएटर, भेन्टिलेटर, आइसियुको सुविधा थियो।
तर, नवजीवन अस्पतालको क्षमताले सेतीले दिँदै आएको सेवा थेग्न सक्ने छैन। किनकि उसँग त्यति पूर्वाधार नै छैन। स्वास्थ्यकर्मीको संख्या पनि सीमित छ।
आइसियु छ, भेन्टिलेटर छैन
सेती अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि पाँच बेडसहितको आइसियु तथा भेन्टिलेटर निर्माण गरिरहेको भए पनि त्यो सम्पन्न नभएको अस्पतालका प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्टेन्ट डा. हेमराज पाण्डेयका अनुसार अस्पतालले ६३ जना चिकित्सकको टोली कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटाइएकाले अन्य बिरामीको उपचारका लागि जनशक्तिको पनि अभाव छ।
‘अस्पतालमा भएको ठूलो जनशक्ति कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएको छ,’ उनले भने, ‘उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई साथी होटेलमा राखिएको छ। कोरोनाको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले अन्य बिरामीलाई हेर्ने कुरा भएन। त्यसैले अहिले अस्पतालले चिकित्सकको अभाव पनि खेपिरहेको छ।’
छुट्टै अस्पतालमा ध्यान खै?
अन्य प्रदेशमा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गरिएको भए पनि सुदूरपश्चिममा एउटै अस्पतालमा उपचार हुन थालेपछि क्रस इन्फेक्सनको जोखिम बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अस्पतालका प्रवक्ता जोशीका अनुसार एउटै अस्पतालमा त्यसरी उपचार गर्दा इटाली लगायतका देशको जस्तो भयावह अवस्था आउन सक्ने जोखिम हुन्छ। तर, अलग्गै उपचार गर्दा त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति पनि अलग्गै हुने र उनीहरूसँग पब्लिक कनेक्सन पनि नहुने भएकाले जोखिम कम हुन्छ।
‘कोरोना संक्रमितका लागि कुनै अस्थायी अस्पतालको व्यवस्था गर्नसके राम्रो हुने थियो। प्रदेश सरकारसँग पनि त्यस विषयमा हामी औपचारिक अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिहेका छौं। यस विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रीलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल भएको थियो। उहाँहरूले सहयोग गर्छु भने पनि कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन,’ डा. जोशीले भने।
सुदूरपश्चिमका सबै ठाउँबाट बिरामीहरू आउने एक मात्र ठूलो भएकाले पनि यहाँ कोरोनाका विरामीको उपचार गर्नु उपयुक्त नभएको बताइएको छ। पटक–पटक प्रदेश सरकारलगायत सम्बन्धित निकायमा चिकित्सकको उपलब्धताका लागि आग्रह गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै चिकित्सक अन्यत्रबाट नआएको जोशीको भनाइ छ। यो समाचार तयार पार्दा केन्द्रबाट ३३ जना चिकित्सकको टोली आउने जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए।
अस्पतालमा पहिलेदेखि पाँच बेडको आइसियु र एउटा भेन्टिलेटर छ। तर, त्यहाँ कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न नमिल्ने भएकाले कोरोना संक्रमितले पनि सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा कुनै ठोस् कदम चाल्न सकेको छैन।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडले पनि आफूहरूले यस विषयमा कुरा गरिरहेको भए पनि प्रदेश सरकारले अग्रसरता नदेखाएको बताए। उनले आफूहरूले मात्रै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रदेश सरकारले भूमिका खेले आफूहरू साथमै रहेको बताए।
उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट पनि अहिले प्रादेशिक अस्पताल भन्दाबाहिर छुट्टै अस्पताल निर्माण गरेर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नुपर्नेमा सक्रिय छिन्। उनले आफूहरूले प्रदेश प्रमुख त्रिलोचन भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्रीसँग उक्त विषयमा कुरा गरिरहेको बताइन्।
उनले अस्पतालले प्रसूति सेवालाई नवजिवन अस्पतालमा सार्नु गलत भएको बताइन्। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य जोडिएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
‘बच्चाको मुटुको धड्कन कस्तो छ भन्ने कुराको तालिम सेती अस्पतालका केही डाक्टरले लिएका छन्। कुनै क्रिटिकल केस् हुँदा आमा र बच्चा दुबै स्वाथ्य जोखिममा हुन्छ। यसमा पनि सरकारले पुनः विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
कुन हुन सक्छ ठाउँ?
कोरोनाका लागि गेटा मेडिकल कलेजलाई तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यहाँ थोरै तयारी गरे राम्रो पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने उपमेयर भट्टले बताइन्। जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा पनि कोरोनाको अस्पताल बनाउन खोजिएकाले जहाँ भए पनि चाडो निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अधिकांश जनताको भरोसाको केन्द्र सेती अस्पतालाई प्रदेश सरकारले चैत्र १५ बाट कोरोनाको उपचारका लागि जिम्मेवारी तोके पनि न बलियो व्यवस्थापन गर्न सकेको छ, न अन्त अस्थायी अस्पताल नै निर्माण गर्न सकेको छ। यो सिंगो प्रदेशको एक मात्र सुविधासम्पन्न अस्पताल हो। यहाँ विशेषज्ञसहितको सेवा भएकाले धेरैको भरोसाको केन्द्र पनि हो यो।
तर, यसै अस्पतालाई कोरोनाको उपचारका लागि तोकेपछि अन्य बिरामी बिचल्लीमा परेका हुन्। निजी अस्पतालहरूले सामान्य रोगका बिरामीलाई पनि नहेरिरहेको गुनासो बढिरहेको समयमा यसले झनै सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था लथालिंग पारिदिएको छ।
यस्तो विषम् परिस्थितिमा अहिले पनि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। चौतर्फी विरोध र दबाबका बीच सरकार के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अन्यौलमा रहेजस्तो देखिन्छ।
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले अन्य विकल्प नभएकाले सुरूमा सेती प्रादेशिक अस्पताललाई नै कोरोना रोगको उपचारका लागि छुट्याइएको बताए। उनले सेतीमा रहेका अन्य बिरामीलाई बरु अन्यत्र व्यवस्थापन गरिने तर कोरोनाको लागि तत्काल अन्यत्र अस्पताल निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए।
सेतीबाहेक अन्यत्र पनि बनाउन सकिन्थ्यो नि? भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री सुवेदीले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा बनाउन सकिने कुरो भएन। सरकारी अस्पतालमा नबनाई निजी अस्पतालमा बनाउने कुरो भएन र उनीहरूले बनाउन दिने कुरो पनि भएन।’ उनले सेती अस्पताललाई नै कोरोना उपचारका लागि विकास गर्न लागेको बताए।
Tags: काेराेना, काेराेनाभाइरस, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९), सुदूरपश्चिम प्रदेश, सेती प्रादेशिक अस्पताल
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कागजको खोस्टो : सिटौला
शनिबार ५७ हजार ६१८ सक्रिय संक्रमित, ३४ को मृत्यु
लिपिङ पुल अवरुद्ध हुँदा टिचिङ र वीरका अक्सिजन प्लान्ट तातोपानीमै रोकिए
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशकले मुस्ताङको भिडिओ ट्विट गर्दै भने : नेपालका स्वास्थ्यकर्मी ‘हिरो’ हुन्
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ?
यी स्थानमा भारी वर्षा, पहिरो र गेग्रान बहावको सम्भावना
भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर आगामी अक्टोबरमा आउने अनुमान